Ngiyacela, isipiliyoni se-indie seLinux | Kusuka kuLinux
Uma unesikhathi esincane sokudlala imidlalo yevidiyo futhi ungomunye walabo abajwayele ukubambeka kakhulu emlandweni kangangokuthi baze bagcine bedlulisa zonke izikrini ongaziyeki, kufanele wazi ukuthi kunemidlalo emifushane kakhulu yevidiyo ongayiqeda ngemizuzu embalwa. Ngakho-ke uma ufuna lolo hlobo lwesipiliyoni esifushane, mhlawumbe Sicela uzokumangaza. Yize i-surreal futhi ingajwayelekile, inokuthile okuhehayo ...
Imidlalo yevidiyo ye-Indie iyathuthuka ezweni lamageyimu, ngakho-ke nakuLinux. Ngiyacela, kusekelwe endabeni encane noma kwi-graphic adventure lapho ungumuntu olungisa izinto, okungukuthi, umakhenikha ozogcina konke kusebenza. Lezi akuzona izikrini eziyinkimbinkimbi noma ezingapheli, kepha zingenziwa ngemizuzu eyishumi uma ulungile. Kepha yize ubufushane, uyisihloko esingalibaleki.
Bathi okuhle kufushane, kuhle kabili. Yebo, ngicela uyithathile leyo filosofi yomdlalo wakhe wevidiyo. Futhi, nomoya wayo okumangazayo okukufaka kuleli zwe ledijithali futhi ikunikeza okuhlangenwe nakho okuhle. Ngaphandle kokungabaza, le adventure engalandeka izokwenza ukuthi weqe esihlalweni sakho, kepha ungatatazeli… Lo akuwona neze umdlalo wesabekayo, yize kunzima ukuchaza ukuthi umayelana nani.
Labo abake bakuzama bathi kungcono ukusebenzisa ama-headphone ngomsindo ocwilisayo, bese ubeka igumbi elimnyama ukudala indawo efaneleke kakhulu yeSiza.
Uma uthanda konke okufundile, unga ulanda funa leli khasi ye-MacOS, iWindows neLinux. Iphakheji ye-Linux icishe icindezelwe nge-85 MB ku-ZIP. Noma ingenayo intengo emisiwe, kuzodingeka unikele ngokuthile ukuyilanda, kepha inani likuwe. Ungakhetha inani ofuna ukulaba ukuvuza umsebenzi wabathuthukisi.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Imidlalo » Ngiyacela, isipiliyoni se-indie seLinux
Akuchazeki, lelo yizwi.
Yeka ukuthi yi-paranoia (futhi ngezinye izikhathi vibes ezimbi): - /
U-Elon Musk usevele uthi iNeuralink isilungele ukuhlolwa kwabantu